Afhayeenka Aqalka Cad oo beeniyay eedeymaha Trump loo soo jeediyay – Radio Muqdisho
Afhayeenka Aqalka Cad oo beeniyay eedeymaha Trump loo soo jeediyay
Afhayeen u hadashay aqalka cad ayaa diidday inay sheegto goorta uu madaxweynuhu ogaa lacago Mr Cohen uu laba qof oo dumar ah siiyey, intii uu socday ololaha doorashada ee 2016, kuwaasoo sheegay in xiriir uu dhex maray ayaga iyo Mr Trump.
Madaxweynaha ayaa ku eedeeyey Mr Cohen inuu abuurayo sheekooyin, si loogu xukumo xukun xoogaa yara khafiif ah.Aqalka cad ayaa ku adkaystay in qirashada qareenkii hore ee DonaldTrump, Michael Cohen, uu qirtay inuu jabiyey shuruucda xagga maaliyadda ee ololeyaasha doorashooyinka uusan micnaheedu ahayn in madaxweynuhu ku lug leeyahay.
Michael Cohen oo ahaa Qareenkii khaaska ahaa ee Donald Trump ayaa Talaadadii Maxkamada kahor qirtay danbiyo lagu soo eedeeyey oo la xariira jabinta sharuucda Federaalka Maraykanka, isagoo sheegay inuu hada diyaar u yahay inuu banaanka soo dhigo xogta qarsoon ee Madaxweyne Donald Trump.
Mr.Cohen oo horey u ahaan jiray Qareenka khaaska ah ee Donald Trump ayaa Salaasadii maxkamada New York ka qirtay dacwado dhawr ah oo lagu soo oogay oo ay ku jiraan 5 danbi oo la xariira jabinta sharuucda Canshuurta, lunsasho lacag iyo jabinta xeerka u yaal lacagaha ololaha doorashooyinka.
Michael Cohen ayaa qirtay in lacag uu siiyey haween horey xiriir qarsoodi ah ulla lahaa Trump kahor doorashadii 2016, si aysan u dhaawicin ololihii doorashada Madaxweyne Donald Trump.